နပွေညျတျောက ကုလအထူးကိုယျစားလှယျရုံးကို အာဏာသိမျးစဈတပျက အခုမှ ဘာလို့ပိတျတာလဲ? – Myanmar Media
နပွေညျတျောက ကုလအထူးကိုယျစားလှယျရုံးကို အာဏာသိမျးစဈတပျက အခုမှ ဘာလို့ပိတျတာလဲ?
နပွေညျတျောက ကုလအထူးကိုယျစားလှယျရုံးကို အာဏာသိမျးစဈတပျက အခုမှ ဘာလို့ပိတျတာလဲ
ကုလသမဂ်ဂအထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာအထူးကိုယျစားလှယျတာဝနျယူခဲ့တဲ့ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသူChristine Schraner Burgener ရဲ့ နပွေညျတျောက ရုံးခနျးကို ပိတျလိုကျကွောငျး အာဏာသိမျးစဈတပျက ဒီဇငျဘာ ၂၁ ရကျနစှေဲ့နဲ့သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။
Christine Schraner Burgener ဟာ အောကျတိုဘာ (၃၁) ရကျနကေ့တညျးက မွနျမာပွညျသူတှကေိုရော ကမ်ဘာကိုပါ ကုလသမဂ်ဂစငျမွငျ့ထကျကနေ တရားဝငျနုတျဆကျပွီး ရာထူးတာဝနျက နားသှားခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။
ခမျြးသာကွှယျဝတဲ့ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံရဲ့ လူအဝငျအထှကျနဲ့ အလုပျလုပျခှငျ့ နထေိုငျခှငျ့ ခိုလုံခှငျ့စတဲ့အရေးကွီးဆုံးအရာတှကေို တာဝနျယူ ဆုံးဖွတျရတဲ့ State Secretary for Migration ဌာနမှာ ပွောငျးရှတေ့ာဝနျယူမှာဖွဈပါတယျ။
ဆှဈဇာလနျအစိုးရက ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဖဖေျေါဝါရီလမှာ စတငျတာဝနျထမျးဆောငျဖို့ တာဝနျပေးခဲ့ပမေယျ့ မအလအာဏာသိမျးလိုကျလို့ ဒီမိုကရစေီအလုခံရတဲ့အပျေါ မကနြေပျလို့ မွနျမာ့အရေးကို ၁ နှဈ ဆကျလုပျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာပါ။
ဆှဈဇာလနျအစိုးရကလညျး သဘောတူခဲ့ပွီး ၁ နှဈနောကျဆုတျပေးခဲ့လို့ အခုလာမယျ့ ဖဖေျေါဝါရီမှာ စတငျတာဝနျယူဖို့ဖွဈလာတာပါ။
သူစတငျတာဝနျယူမယျ့အခြိနျကစပွီး ဆှဈဇာလနျမွပေျေါကို မအလစဈတပျနဲ့ကွံရာပါတှေ ဆှမြေိုးသားခငျြးအားလုံးအနနေဲ့ အရငျကလို စြေးဝယျလာလိုကျ နှငျးလြှောစီးလိုကျ ဓါတျပုံရိုကျလိုကျ စတဲ့ ဖလနျးဖလနျးခရီးစဉျတှေ အပါအဝငျ လာရောကျလုပျကိုငျစားသောကျဖို့အစီအစဉျတှေ ဘဏျအကောငျ့တှေ မလေို့ကျလို့ ရပွီလို့ ပွောရပါမယျ။
မွနျမာပွညျက ဒီမိုကရစေီကို ဖကျြဆီးခဲ့သူတှေ ကွံရာပါတှအေကွောငျးကို အသေးစိတျသိထားတဲ့ State Secretary for Migration ကို မိသားစုဆှမြေိုးသားခငျြးတှေ ဆှဈဇာလနျလာခှငျ့ နခှေငျ့ထိခိုကျမှာစိုးတဲ့ မအလစဈတပျအသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ ကွံရာပါတှကေ အပေးအယူလုပျဖို့ကြိုးစားခဲ့ပမေယျ့
Christine Schraner Burgener က အဖကျမလုပျပဲ အတှမေ့ခံခဲ့ဘူးဆိုပါတယျ။ သူတို့သားသမီးဆှမြေိုးတှအေတှကျ ဘယျလိုမှ ခညျြးကပျလို့မရတော့မှနျးသိလို့ နပွေညျတျောက ရုံးကို မအလစဈတပျက မပိတျခငျြပဲ အခုမှ ပိတျလိုကျရတာလို့ ယူဆကွပါတယျ။
တခြိနျထဲမှာပဲ အသဈခနျ့အပျတာဝနျပေးထားတဲ့ ကုလသမဂ်ဂအထူးကိုယျစားလှယျ စင်ျကာပူနိုငျငံသူကို လညျး အလိုမရှိ လကျမခံခငျြဘူးဆိုတာကို မအလစဈတပျက ပွသလိုကျတဲ့သဘောလို့လညျး ဂြီနီဗာ သံတမနျအသိုငျးအဝိုငျးက သုံးသပျပါတယျ။
ကမျဘောဒီးယားကလှဲရငျ သူတို့ပွောသမြှ ဘယျအထူးကိုယျစားလှယျကမှ ယုံကွညျမှာ မဟုတျတော့ဘူးဆိုတာ မအလစဈတပျက ကောငျးကောငျးသဘောပေါကျသှားပွီလို့လညျး Christine Schraner Burgener နဲ့နီးစပျသူတခြို့က ပွောပါတယျ။
ဂြာမဏီနဲ့ ထိုငျးမှာ သံအမတျကွီးတာဝနျယူခဲ့ဘူးတဲ့Christine Schraner Burgener ဟာ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျအဖွဈ နောကျဆုံးတာဝနျယူရတဲ့နကေ့ မွနျမာပွညျသူတှကေို ဆိုရှယျမီဒီယာကနေ နုတျဆကျအားပေးခဲ့သလို
” နကွောပနျးတိုငျးဟာ အမွဲခေါငျးထောငျမနနေိုငျပါဘူး။ တခြိနျမှာ အပွီးတိုငျ ခေါငျးငုံ့ဦးညှတျသှားရတာပါ။ အာဏာရှငျတှေ ဆငျးကိုပေးရမယျ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ နောကျဆုံးရေးသားခဲ့ပါတယျ။
နေပြည်တော်က ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က အခုမှ ဘာလို့ပိတ်တာလဲ
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသူChristine Schraner Burgener ရဲ့ နေပြည်တော်က ရုံးခန်းကို ပိတ်လိုက်ကြောင်း အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Christine Schraner Burgener ဟာ အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်နေ့ကတည်းက မြန်မာပြည်သူတွေကိုရော ကမ္ဘာကိုပါ ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်ကနေ တရားဝင်နုတ်ဆက်ပြီး ရာထူးတာဝန်က နားသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ လူအဝင်အထွက်နဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့် နေထိုင်ခွင့် ခိုလုံခွင့်စတဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာတွေကို တာဝန်ယူ ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ State Secretary for Migration ဌာနမှာ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရက ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့ပေမယ့် မအလအာဏာသိမ်းလိုက်လို့ ဒီမိုကရေစီအလုခံရတဲ့အပေါ် မကျေနပ်လို့ မြန်မာ့အရေးကို ၁ နှစ် ဆက်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရကလည်း သဘောတူခဲ့ပြီး ၁ နှစ်နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့လို့ အခုလာမယ့် ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ စတင်တာဝန်ယူဖို့ဖြစ်လာတာပါ။
သူစတင်တာဝန်ယူမယ့်အချိန်ကစပြီး ဆွစ်ဇာလန်မြေပေါ်ကို မအလစစ်တပ်နဲ့ကြံရာပါတွေ ဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံးအနေနဲ့ အရင်ကလို ဈေးဝယ်လာလိုက် နှင်းလျှောစီးလိုက် ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက် စတဲ့ ဖလန်းဖလန်းခရီးစဉ်တွေ အပါအဝင် လာရောက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့အစီအစဉ်တွေ ဘဏ်အကောင့်တွေ မေ့လိုက်လို့ ရပြီလို့ ပြောရပါမယ်။
မြန်မာပြည်က ဒီမိုကရေစီကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူတွေ ကြံရာပါတွေအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိထားတဲ့ State Secretary for Migration ကို မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ဆွစ်ဇာလန်လာခွင့် နေခွင့်ထိခိုက်မှာစိုးတဲ့ မအလစစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ကြံရာပါတွေက အပေးအယူလုပ်ဖို့ကျိုးစားခဲ့ပေမယ့်
Christine Schraner Burgener က အဖက်မလုပ်ပဲ အတွေ့မခံခဲ့ဘူးဆိုပါတယ်။ သူတို့သားသမီးဆွေမျိုးတွေအတွက် ဘယ်လိုမှ ချည်းကပ်လို့မရတော့မှန်းသိလို့ နေပြည်တော်က ရုံးကို မအလစစ်တပ်က မပိတ်ချင်ပဲ အခုမှ ပိတ်လိုက်ရတာလို့ ယူဆကြပါတယ်။
တချိန်ထဲမှာပဲ အသစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် စင်္ကာပူနိုင်ငံသူကို လည်း အလိုမရှိ လက်မခံချင်ဘူးဆိုတာကို မအလစစ်တပ်က ပြသလိုက်တဲ့သဘောလို့လည်း ဂျီနီဗာ သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။
ကမ်ဘောဒီးယားကလွဲရင် သူတို့ပြောသမျှ ဘယ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကမှ ယုံကြည်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ မအလစစ်တပ်က ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီလို့လည်း Christine Schraner Burgener နဲ့နီးစပ်သူတချို့က ပြောပါတယ်။
ဂျာမဏီနဲ့ ထိုင်းမှာ သံအမတ်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့Christine Schraner Burgener ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် နောက်ဆုံးတာဝန်ယူရတဲ့နေ့က မြန်မာပြည်သူတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေ နုတ်ဆက်အားပေးခဲ့သလို
” နေကြာပန်းတိုင်းဟာ အမြဲခေါင်းထောင်မနေနိုင်ပါဘူး။ တချိန်မှာ အပြီးတိုင် ခေါင်းငုံ့ဦးညွှတ်သွားရတာပါ။ အာဏာရှင်တွေ ဆင်းကိုပေးရမယ်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ နောက်ဆုံးရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ရနျကုနျတှငျ လကျနကျခဲယမျးမြားလာရောကျအပျနှံရနျ ကွညောပွီးနောကျ စဈကောငျစီတပျမြား တိုကျခိုကျခံရ